UDI oo 10.000 dheeri ah siinayso qofkii raba inuu iskiis wadankiisa ugu noqdo - NorSom News
Laga bilaabo maanta ilaa lixda isbuuc ee soo socoto hay-ada UDI-da ayaa sheegtay inay 10.000 oo dheeri ah siinayso qofkii sharciga loo diiday ee raba inuu si iskiis ah(frivillig ah) ugu noqdo wadankiisa. Lacagtan ayaa la siinayaa 500 boqol ee ugu horeysa ee isa soo diiwaan galisa. Isku dar lacagta lasiinayo qofka raba inuu wadankiisa ku noqdo ayaa sidaas ku noqonaysa 30.000 oo lacagta norwiijiga ah, una dhiganta ilaa 3000 oo dollarka mareykanka ah.
Wasiirada maalmahan qof walbe afka ku hayo ee Sylvi Listhaug ayaa sheegtay inay dowladu rabto in qofka sharciga loo diiday lagu dhiirigaliyo inuu wadankiisii ku noqdo, sidaasna ay dowlada ugu baaqato lacagaha tirada badan ee qofka aan sharciga laheyn ku baxa marka uu ku jiro kaamka(mottak). Sidoo kale UDI-da ayaa sheegtay inay lacagtan qofka ka caawinayso inuu nolol ka sameysto markii uu ku noqdo wadankiisa, oo uusan asaga oo gacan-maran lagu celin wadankiisii
si uu qofka u helo lacagtan waxaa ku xiran shuruud:
Waa inuu Norwey iska soo dhiibay wixii ka horeeyay kowda bishan April
Waa inuu uusan wadan kale oo yurub ah uusan iska soo dhiibin(faro ka yaalin)
Les mer på norsk her:
Previous articleDowlada Norwey oo bilaabaysa inay sharciyada kala noqoto soomaalida aan degenaanshaha qaadan.
Next articleArdey soomaali ah oo dhigata iskuulka Os oo qayb weyn ka qaatay xaflad dhaqan iyo is dhexgal.